Alaotra Mangoro : nitatitra ny zava-bitany ireo depioten’Ambatondrazaka | NewsMada
Alaotra Mangoro : nitatitra ny zava-bitany ireo depioten’Ambatondrazaka
Nifanesy nanao tatitra ny asa notontosainy avy ireo depiote roa voafidy tao amin’ny distrikan’Ambatondrazaka, roa taona taorian’ny nahalanian’izy ireo ny faran’ny volana janoary teo.
Nambaran’ny depiote Andrianiriana Marohajaniaina fa anisan’ny dingana voalohany, teo amin’ ny fomba fiasany ny fanatsarana sy fanamafisany ny fifandraisany amin’ireo rafi-panjakana. “ Mila tezaina hanaja rafitra ny vahoaka”, hoy izy. Momba ny fanampiana indray, nambarany fa niainga amin’ny herin’ny tenany izany. “Ny am-paosy no mivoaka. Notsidihina avokoa ireo kaominina 16 amin’ny 22 ”, hoy ihany izy.
Noresahiny koa ny lalam-pirenena RN 44 ka nambarany fa efa nanome toky ny mpitondra ka tokony hanomboka amin’ny volana jona ny asa fanamboarana izany raha tsy misy ny fiovana.
Hahazo fitaovana vonjy voina sy fiara lehibe fanariana fako ny distrika. Eo koa ny fanajariana ny tanànan’Ambatondrazaka sy fanaingana ny kaominina tsirairay handroso tetikasa hampiasana ny vola 200 tapitrisa Ar isaky ny disitrika.
Nanao tatitra koa ny depiote Andriamasimanana Auréline ka niompana amin’ny fiaraha-miasa amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena izany. “Nezahina ny hanome fahafaham-po ireo mpampianatra Fram eo amin’ny fampidirana azy ireo ho mpiasam-panjakana. Atao mangarahara izany satria maro ny mitaraina… Ny manao zavatra koa anefa, tsy mora”, hoy izy.
Momba ny fametrahana fandriampahalemana kosa, nambarany fa milamina izany. “Mandry fahalemana ny distrikan’Ambatondrazaka sy Amparafaravola”, hoy ihany izy.